Reformista Mpanoratra, Nosamborina Alohan’ny Dian’ny Filoha Iraniana Ho any Amin’ny Firenena Mikambana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2016 2:12 GMT
Sandra Mohagegh. Sary avy amin'i ICHRI ary nahazoana alalana ny fampiasàna azy.
Nivoaka voalohany tao amin'ny vohikalan'ny Fanentanana Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona any Iràna ny dika voalohan'ity lahatsoratra ity.
Nosamborina ny 19 Septambra 2016 i Sadra Mohaghegh, tonian-dahatsoratry ny gazety reformista Iraniana, Shargh, nefa tsy mazava ny toe-javatra manodidina ny fisamborana azy, hoy ny mpisolovava azy.
Ny fisamborana dia nitranga taorian'ny fitsidihana iraisam-pirenena nataon'ny Filoha Hassan Rouhany izay hiafara any amin'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana, hanaovany tafatafa ho an'ny mpanao gazety amin'ny 22 Septambra.
Nilaza tamin'ny Fanentanana Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona any Iràna i Mohammad Saleh Nikbakht fa mpiasanà orinasa mpiambina no nitondra ny olona arovany ho any an-tranomaizina, fa tsy nety nampahafantatra izay mpampiasa azy ireo mpiasa ireo..
“Nogiazan'ireo mpiasa ny solosaina sy ny findain'i Mohaghegh sy ny vadiny ary nangatahin'izy ireo ny tenimiafina amin'ny tambajotra sosialin'izy ireo” hoy ny loharanom-baovao tamin'ny Fanentanana.
Nitatitra ny masoivohom-baovao tsy tena ofisialy Mehr tamin'ny 19 Septambra fa notazonin'ny “iray amin'ireo sampan-draharaha fiarovana” ny tonian-dahatsoratry ny gazety antsoina hoe “S-M” satria miaraka miasa amin'ny haino aman-jery ‘manohitra ny revolisiona”. Ny harivan'io andro io ihany, tao amin'ny kaonty Twitter-ny dia nanamafy ny fisamboranan an'i Mohaghegh ny Shargh.
Nalefan’ i Mehr ny tatitra niaraka tamin'ny sary nampiasain'ny Mpiambina Revolisionera any Iràna, fikambanana tompon'andraikitra amin'ny fampidirana am-ponja ireo mafàna fo maro, mpanao gazety sy mpanohitra –mba ho fanta-bahoaka ny famoretana ny mpanao gazety izay lazain-dry zareo fa miasa ho an'ny “firenena fahavalo.”
Malaza noho ny famoahany tatitra momba ny olan'ny tontolo iainana sy ny olan'ny haino aman-jery sosialy i Mohaghegh. Lasa tsy azo nidirana intsony ny kaonty Facebook sy Twitter-ny. Efa in-droa nosamborina nandritry ny fotoana fohy izy tany aloha, tamin'ny taona 2012 sy 2013 fa tsy mbola notsaraina..
Mpanao gazety iray hafa, Yashar Soltani, no mbola voatazona ao am-ponjan'i Evin tamin'ny 17 Septambra rehefa tsy afaka nandoa ilay onitra eo amin'ny 2 lavitrisa Rials (eo ho eo amin'ny 65.000 Dolara amerikana) ho famotsorana azy talohan'ny fotoam-pitsarana. Soltani, lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny Gazety Memari, vohikala tsy miankina izay naato tamin'ny 9 Septambra 2016 dia nanaovana fanadihadiana nohon'ny namoahany tatitra ofisialy momba ireo famarotana tany tsy ara-dalàna nataon'ny Ben'ny tanànan'i Teheran.